အွန်လိုင်းမှာ ငွေရှာနည်း — MYSTERY ZILLION
January 2010 edited February 2011 in ဖတ်စရာ
ဒီနေ့ခောတ် စီးပွားရေး အခြေအနေအရ Gas ၊ စားသောက်ကုန် ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ မိုးထိအောင်တက်နေတော့ လူတွေရဲ့၀င်ငွေ
ဟာ ကုန်စျေးနှုန်းကို လိုက်လို့မမီဘူးဆိုတာ သိရှိလာကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လူအများစုဟာ ငွေကို အလျင်အမြန်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်
အင်တာနက်စီသို့ ခြေဦးလှည့်လာကြတာ မဆန်းပါဘူး ။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သုံးစွဲခ ဘီလ် ( bill ) ကို ဘယ်လိုပေးချေရမလဲ ဆိုတာနဲ့
ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်နေကြပါတယ် ။ တခါတလေမှာလည်း ဘီလ်တောင်းခံမှုက အရမ်းများနေတတ်ပါတယ် ။
အခုဖော်ပြမှာကတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အလွယ်တကူ အင်တာနက်မှာ ငွေရှာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ။ သင်ဟာ ချမ်းသာသွားမှာလား? အဲလိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး ။ ဒါပေမယ့် တစ်လမှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ ၊ ၃၀၀ ကျော်လောက်တော့ ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ Ebay အကြောင်း မပြောလို့တော့ မဖြစ်ဘူး ။ ငွေကို ချက်ချင်းရှာဖွေနေချင်သူအတွက်တော့ Ebay ဟာ သိပ်တော့မကောင်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူက လူတွေအားလုံးကို အိမ်မှာနေပြီး ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အွန်လိုင်း (online) မှာ ရောင်းခွင့်ပေးထားလို့ပါ ။
eBay မှာ စျေးရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ရောင်းဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုခု ရှာရမှာပေါ့ ။
သင်ဟာ ဒီကနေပြီး eBay မှာ Register လုပ်လို့မရပါဘူး ။ Country or Region Box မှာ My နဲ့ စတဲ့ နိုင်ငံမပါဘူး ။
သင်ဟာ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ Hong Kong, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam တို့ရဲ့ Address,
City, State, Zip Code, Telephone Number တို့ဖြင့် Register လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
eBay မှ ၀င်ငွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ရောင်းချမလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ရှင်းပြထားသော Ebay For Dummies Starter Kit လို့ခေါ်တဲ့ ebook စာအုပ်တွေကို ၀ယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
Freelancer ဆိုတာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ့်ဘာသာလုပ်သူ ၊ မည်သည့် အလုပ်ရှင်နဲ့ ရေရှည် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားခြင်း မရှိသူ လို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။
သင်ဟာ အင်တာနက်မှာ freelance writer စာရေးဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် ။ Businesses စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ၊ Internet Marketers အင်တာနက်မှာ အရောင်းမြှင့်တင်တဲ့သူတွေ ၊ about.com လို website တွေဟာ freelance writers တွေကို အသုံးပြုပါတယ် ။ ကံကောင်းတာက သင်ဟာ ကျွမ်းကျင်သော စာရေးဆရာ ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး ။
သင်ဟာ freelance writer အဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် websites များအတွက် Blog post, Articles ဆောင်းပါးများကို ရေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သင်ဟာ fiction စိတ်ကူးယဉ်စာပေသော်လည်းကောင်း ၊ non-fiction အမှန်တရားတွေ၊ လူအကျင့်စရိုက်တွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ အကြောင်းသော် လည်းကောင်း ရေးသားဖို့ အခွင့်အရေး ရနိုင်ပါတယ် ။
သင်ဟာ တစ်နေ့ကို ဆောင်းပါးအနည်းငယ်ရေးပြီး ငွေကို ရယူပါ ။ ဒီ အခွင့်အရေးကို http://www.reviewopedia.com/freelancehomewriters.com.htm မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
note : သင်ဟာ freelance photographer, freelance graphic designer အဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ် ။
Company များမှာ ဖတ်ဖို့လိုအပ်သော emails တွေ တစ်နေ့မှာ ထောင်နဲ့ချီပြီး ၀င်နေပါတယ် ။ CEO (သို့) အလုပ်ရှင်ဟာ နေ့တိုင်း
email ဖတ်ဖို့ အချိန် မဖြုန်းနိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် email ဖတ်ပေးဖို့ လူငှားတယ်ပေါ့ ။
email ဖတ်ပေးခကိုတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လက်မှုပစ္စည်းတွေလုပ်တတ်ပါသလား? www.etsy.com မှာ လက်မှု ပစ္စည်းတွေ ( handmade craft or product ) အရောင်း အ၀ယ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ။ ရောင်းချသူများဟာ eBay ထက်ပိုပြီး အကျိုးအမြတ် ရကြပါတယ် ။ သင်ဟာ ဒီလိုမျိုး ပြုလုပ်နိုင်သူ ဆိုရင်တော့
ငွေတွေ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ ။
သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် website ရှိစရာ မလိုပါဘူး ။ Blogging software များကိုလည်း install လုပ်စရာမလိုပါဘူး ၊ ကြော်ငြာများကို ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ ဆိုတာကို လည်းသိဖို့မလိုပါဘူး ။ Blogger.com မှာ web design ကို ဘာမှနားမလည်လဲ blog တစ်ခုကို အခမဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ Blogger ဟာ Google AdSense နဲ့ ဆက်သွယ်ထားပြီး သင်ဟာ သင့်ရဲ့ blog မှာ ကြော်ငြာ ads တွေကို ဖော်ပြခြင်း ၊ လူတွေဟာ အဲဒိ ads ကြော်ငြာ တွေကို click နှိပ့်ခြင်း ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ သင်ဟာ ၀င်ငွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒိထက် ၀င်ငွေပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ affiliate program တွေကို အသုံးပြုပါ ။ Monetizing your blog နဲ့ ပတ်သက်ပြီး http://weblogs.about.com/od/?once=true& ဒီ link မှာ ဆက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။ သင်ရဲ့ blog ကို လူတွေ အများကြီး ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုဖို့အတွက် စိတ်၀င်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများကို ရေးပါ ၊ အရေးအသားကောင်းပါစေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြပါ ၊ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် ။
Related : http://www.problogger.net/
အင်တာနက်မှာပိုက်ဆံရှာနည်း မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းပေးရင်းပိုက်ဆံရှာခြင်း၊ အချက်
အလက်များထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် ပိုက်ဆံရှာခြင်း၊ ဆာဗေးများလုပ်၍ပိုက်ဆံရှာခြင်း၊ စာရေးသားခြင်းဖြင့်
ပိုက်ဆံရှာခြင်း စသဖြင့်ပေါ့။ အဲ နောက်ဆုံးတစ်ခု အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး ပိုက်ဆံရှာနည်း ကတော့
ကြော်ငြာဝဘ်ဆိုဒ်များကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ပိုက်ဆံရှာနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ PTC လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကြော်ငြာဝဘ်ဆိုဒ်များကို ကြည့်ရှုရုံနဲ့ ပိုက်ဆံပေးတဲ့ဆိုဒ်ပါ။ အဲဒီမှာ မေးစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု
ကြည့်ရုံနဲ့ ပိုက်ဆံတကယ်ပေးသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ သည်ဘက်ခေတ်တွေမှာ အင်တာနက်မားကတ်တင်း
ဆိုတာ ခေတ်စားလာပါတယ်။ အင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေ ထိုင်ရာမထ ပိုက်ဆံရှာနိုင်နေပါပြီ။ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်
ခုဝင်ကြည့်ရုံနဲ့ ပိုက်ဆံရတဲ့ပေးတဲ့ဆို်ဒ်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးပါ။ ဥပမာ သင်က ဝဘ်ဆို်ဒ်တစ်ခုလုပ်ပြီး ခုနက
ပြောသလို ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဝင်ကြည့်ရုံနဲ့တင် ပိုက်ဆံပေးတဲ့ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ မိမိဝဘ်ဆိုဒ်ကို အကောင့်လုပ်ထား
တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို တစ်ခြားသူတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်ရုံနဲ့တင် ကိုယ်က ပိုက်ဆံရပါတယ်။ အဲဒီလို
ဆိုဒ်တွေဟာလည်း အင်တာနက်မှာ တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးပါ။ ယခုပြောမယ့်ဆိုဒ်ဟာလည်း အဲဒီလိုစနစ်ကျင့်သုံး
ထားပြီး သဘောတရားကို ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ၄င်းဆိုဒ်မှာအကောင့်လုပ်ပြီး ကြော်ငြာကြည့်ရုံနဲ့တင် ဝင်
နောက်ပြီး အင်တာနက်ဆိုတာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆိုဒ် အမှန်တကယ်ရိုးသားပြီးပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်
တဲ့ဆိုဒ်များအတော်ကိုရှားပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိတဲ့ဆိုဒ်တွေအများကြီးပါ။ ပိုက်ဆံ
တကယ်ပေးသလားမပေးဘူးလားဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်
ယုံကြည်တာမယုံကြည်တာ ကျွန်တော့်အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၄င်းဆိုဒ်ဟာ ၉၉.၉၉ရာနှုန်း ပိုက်ဆံ တကယ်ပေး
ကြောင်း အာမခံပါတယ်။ ၀.၀၁ ရာနှုန်းကတော့ ၄င်းဆိုဒ်ရဲ့ စည်းကမ်းများနဲ့ မညီလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှားအယွင်း
တစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၄င်းဆိုဒ်မှငွေမပေးခြင်းပါ။ စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာဖော်ပြပေးသွား
၄င်းဟာ ကြော်ငြာဝဘ်ဆိုဒ်ကြည့်ရုံနဲ့ ပိုက်ဆံပေးပါတယ်။ စစဝင်ချင်း မန်ဘာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို
ကြော်ငြာဝဘ်ဆိုဒ်လေးခု ကြည့်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ကြော်ငြာတစ်ခုစီကို ၀.၀၁ ဒေါ်လာပေးပါတယ်။ လေးခု ဆို
တော့ ၀.၀၄ ဒေါ်လာပေါ့။ အနည်းဆုံး ၂ ဒေါ်လာပြည့်ရင် ထုတ်နို်င်ပါပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဝင်ငွေတိုးအောင် ပြု
အွန်လိုင်းမှာ ငွေချေခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း စသည်များကို ခြားခံအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ အ
စည်း ဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ ၄င်းဆိုဒ်များ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ဘယ်ဆိုဒ်မှာမဆို ငွေချေတဲ့ဆိုဒ်များမှတစ်
ဆင့် ငွေချေခြင်း အပါအဝင် ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ခုပြောထားတဲ့ဆိုဒ်ဟာ ငွေချေ စ
Paypal, Alertpay and Neteller များပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မသင့်တော်တဲ့အတွက် ချန်လှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ၄င်းငွေချေဆိုဒ်များ
ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် ပေးငွေများကို အထက်ပါ စနစ်များမှတစ်ဆင့် ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီ
ဘယ်လိုရအောင်ထုတ်မလဲဆိုတာကတာ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ သူငယ်ချင်းများအတွက်ကတော့ အခက်အခဲတစ်ခု
အဖြစ်တည်ရှိနေပါဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ယာယီသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ ငွေချေဆိုဒ်များဟာ အွန်လိုင်းကနေ တစ်ဆင့် ငွေချေနိုင်တဲ့အတွက် ရလာတဲ့ပိုက်ဆံများကို
ဝဘ်ဆိုဒ်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲများဝယ်ယူခြင်းအပြင် အီးဘုတ်များဝယ်ယူခြင်း စတာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်
Neobux Account လုပ်နည်း
ကိုသွားပြီး ဘယ်ဘက်ဘောက်စ် အောက်မှ အကောင့်လုပ်သော ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး အကောင့်လုပ်နို်င်ပါတယ်။
Neobux ဝင်ငွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
1. အကောင့်လုပ်သော ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး အကောင့်လုပ်ပါ။
2. Homepage မှတစ်ဆင့် login ဝင်လိုက်ပါ။ (Secondary password ချန်ထားနို်င်ပါတယ်)
3.ပြီးရင် ဝင်ထားတဲ့ စာမျက်နှာရဲ့ ညာဘက်ထိပ်ဆုံးမှ View advertisements ကိုနှိပ်ပါ။
4.ကြော်ငြာ လင့်ခ်လေးခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲကတစ်ခုကိုနှိပ်လို်က်ပါ။
5.အနီရောင်အစက်လေးတစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အနီရောင်အစက်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကတော့ ကြော်ငြာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ပါပဲ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ
အကောင့်ထဲကို ငွေသွင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြသပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင်တော့ ကြည့်ထားတဲ့စာမျက်နှာကို ပိတ်ပြီး ကျန်တဲ့ လင့်ခ်သုံးခုကို ဆက်နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ။ ဝင်ဝင်ချင်း မန်
ရမှာပါ။ လင့်ခ်အသစ်များရောက်မလာပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ တစ်ခုနှစ်ခုရောက်လာတတ်ပါတယ်။
ဝင်ငွေတိုးအောင်လုပ်နည်း ဝင်ဝင်ချင်းမန်ဘာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကိုကြော်ငြာလေးခုပဲကြည့်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် အချို့သူငယ်ချင်း
များ စိတ်မရှည်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဝင်ငွေတိုးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ခုကတာ့
နှိပ်စရာဝဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်များကို ဝယ်ယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၅ဒေါ်လာနဲ့ ဝယ်ယူနို်င်ပြီး နှိပ်စရာ ဝဘ်ဆိုဒ်များကို
နှစ်ဆထိတိုးလိုက်တဲ့အတွက် တစ်နေ့ဝင်ငွေပိုတိုးလာနို်င်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့
အကောင့်နဲ့ အခြားသူများကို ညွှန်းပြီး အကောင့်လုပ်ကြော်ငြာကြည့်ခိုင်းခြင်းဖြင့် ၄င်း နှိပ်သောသူများထဲကမှ
လင့်ခ်များထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို ကော်ပီကူးယူပြီး အခြားသူများအား အကောင့်လုပ်
ကြော်ငြာကြည့်စေခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့နှိပ်သမျှထဲမှ တစ်ဝက်ကို ကိုယ်ကရတဲ့အတွက် အဲဒီလိုများများလုပ်လေ
ကိုယ်က ပိုက်ဆံပိုရလေဖြစ်ပါတယ်။ လင့်ခ်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးနို်င်သလို မိမိမှာဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိနေရင်လည်း
ကိုယ့်ဘလော့ထဲမှာ neobux ကုဒ်ကိုယူပြီးပုံအနေနဲ့ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
Referral များကို ကိုယ်တိုင်မညွှန်းပဲ ငှားရမ်းခြင်း
(Account Summary > Referrals လင့်ခ်များမှတစ်ဆင့်သွားပါ)
သူကတော့ နှိပ်နေတဲ့သူများရဲ့အကောင့်ကို ခဏငှားပြီး ၄င်းတို့နှိပ်သမျှထဲကတစ်ဝက်ကို ကိုယ်ကရရှိခြင်းပါ။
တိုက်ရိုက် နဲ့ ငှားရမ်းစနစ်နှစ်ခုစလုံးဟာ သူများနှိပ်ရင် တစ်ဝက်ရတဲ့အတွက် သူနှိပ်ရင် သူ့အကောင့်ထဲကို
၀.၀၁ ဒေါ်လာရောက်သွားသလိုကိုယ့်ထဲကိုလည်း ၀.၀၀၅ ဒေါ်လာရောက်လာပါတယ်။ တစ်လကို ၀.၇၅ ဒေါ်
လာကနေစပြီး ငှားလို့ရပါတယ်။ ငှားပြီးကိုယ်က ထိုင်နေလို့တော့မရပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်းနှိပ်ပေးမှ ကိုယ်ရ
တဲ့ကလစ်အရေအတွက်နဲ့မြှောက်ပြီး ပိုက်ဆံရပါတယ်။ တစ်ရက်ပျက်လို့ရှိရင်တော့ မနေ့ကပျက်ခဲ့တဲ့အတွက်
ပျက်ခဲ့တဲ့ရက်က ပိုက်ဆံကို ကိုယ်ကမရပါဘူး။ ငှားခကို ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာစုပြီး ငွေချေနို်င်သလိုငွေချေတဲ့
Paypal or Alertpay အကောင့်ရှိပြီးသူများအတွက်
သည်ဆိုဒ်ဟာ အကောင့်လုပ်ပြီး အချက်ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်မှ Referralsများနဲ့ပက်သက်တဲ့ကိစ္စများကို လက်ခံ
ပါတယ်။ ငွေချေစနစ်များမှာ အကောင့်ရှိပြီး ပိုက်ဆံရှိပြီးသူများအတွက်ကတော့ ကလစ် ၁၀၀ နှိပ်ပြီးသွားရင်
Direct referral ရော Rental referral ရော နှစ်မျိုးစလုံးကို စိတ်ကြိုက်ငှားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Neobux မှ ငွေထုတ်နည်း
သည်ဆိုဒ်ဟာ ကနဦးမန်ဘာများအတွက် အနည်းဆုံး ၂ ဒေါ်လာပြည့်ရင် ထုတ်နို်င်ပါပြီ။ သို့သော် ဒုတိယငွေ
ထုတ်ခြင်းမှစပြီး တစ်ဒေါ်လာစီတိုးသွားကာ နောက်ဆုံး ဆယ်ဒေါ်လာပြည့်မှ ရပ်သွားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက
ပထမငွေထုတ်ခြင်း အနည်းဆုံး ၂ဒေါ်လာ ဒုတိယငွေထုတ်ခြင်း ၃ဒေါ်လာ စသဖြင့်ပေါ့။
(Account Summary လင့်ခ်မှတစ်ဆင့်သွားပါ)
ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာ ၂ဒေါ်လာပြည့်ပြီးသွားရင်တော့ ညာဘက်ဆုံးက ခလုပ်လေးစိမ်းလာပြီး ထုတ်လို့ရပါပြီ။
နှိပ်လိုက်ရင်တော့ ငွေချေစနစ်နှစ်မျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုအဆင်မပြေရင် တစ်ခုရွေးနိုင်ပါတယ်။
ငွေချေစနစ် အကောင့်မရှိသူများ အောက်ပါလင့်ခ်များကို နှိပ်ပြီး အကောင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သည်ဆိုဒ်ဟာ အထက်ပါငွေချေဆို်ဒ်များကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်အကောင့်မှာ ငွေ ၂ဒေါ်လာ
ရလာပြီဆိုရင်တော့ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဆိုဒ်များမှ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သည်ဆိုဒ်ရဲ့ စည်းကမ်းချက်များအ
ရ ထုတ်ပြီးပိုက်ဆံရယူရန် ၄၈နာရီ ကြာမယ်လို့ရေးထားသော်လည်းပဲ ကျွန်တော်ထုတ်ပြီး ပိုက်ဆံရတဲ့အချိန်
ကတော့ စက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာပါတယ်။ ၄င်းကို Instant payment လို့ခေါ်ပါတယ်။
ညာဘက်ဆုံးက စိမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ခလုတ်ကလေးကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့ အထက်ပါအတိုင်း ပြပါလိမ့်မယ်။ ငွေ
ထုတ်ပြီးသွားရင်တော့ ထုတ်ပြီးသွားကြောင်းကို ဆိုဒ်ထဲက အခြေအနေပြစနစ်မှာကြည့်နိုင်သလို ကိုယ်လုပ်
ထားတဲ့ ငွေချေစနစ် အီးမေးလ်ထဲသို့လည်း ငွေထည့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပါလိမ့်မယ်။
စာတမ်းအစိမ်းလေးမြင်ရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ငွေချေစနစ်အကောင့်ထဲကို ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။
Neobux မှပေးငွေ ၂ဒေါ်လာကို အံ့သြပျော်ရွှင်စွာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Account upgrade လုပ်နည်း
ဝင်ငွေပိုတိုးအောင်လို့ ကိုယ့်အကောင့်ကို Upgrade ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တော့ ညာဘက်ဘေးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လိုအပ်ချက်သုံးခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ ပြည့်မီသွားရင်တော့
တစ်ခုချင်းစီ ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သုံးခုစလုံးဖျက်ပစ်မှ လုပ်ဆောင်နို်င်ပါတယ်။ အသေးစိတ်လေ့လာ
After your upgrade , စာတန်းနောက်က More info ကိုနှပ်ပြီးလေ့လာနို်င်ပါတယ်။
မိမိဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြော်ငြာခြင်း၊ အကောင့်ကို ဝင်ငွေတိုးအောင်လုပ်ခြင်း၊ ပိုက်ဆံထုတ်ခြင်း၊ မိမိအကောင့်၏
လုပ်ငန်းပြဇယား၊ Referral ငှားရမ်းခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းပြုလုပ်နိုင်သော လင့်ခ်များပါဝင်သည်။
တစ်ခြားသူများအား refer လုပ်ရန် လင့်ခ်များပါဝင်သည်။
မိမိအကောင့်နှင့်ပက်သက်၍အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကို ပြောင်းလဲနိုင်
သလို paypal , alertpay မေးလ်များပြောင်းရန်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။
မိမိိကြော်ငြာထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်များ (ကြော်ငြာမထားလျှင် ဘာမျှပေါ်မည်မဟုတ်ပါ)
Referral link မှတစ်ဆင့်အကောင့်လုပ်နှိပ်နေသူများ၏ အချက်အလက်များကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ငှားရမ်းထားသော Referral များ၏ ကလစ်နှိပ်နှုန်းကို သိစေရန်နှင့် လူအပြောင်းအလဲများလုပ်နိုင်သည်။
မိမိနှိပ်လိုက်သော ကလစ်အရေအတွက်များ၊ ငှားရမ်းထားသူများ၏ ကလစ်အရေအတွက်များ ရထားသော
မိမိပြုလုပ်ထားသော အပြူအမူများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ( ဘယ်နေ့
မှစ၍ မန်ဘာဖြစ်သည်။ ဘယ်သူတွေ မိမိအောက်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည် စသည်များပါဝင်သည်။ )
စည်းကမ်းချက်များ ဝဘ်ဆိုဒ်တိုင်းမှာ သူ့စည်းကမ်းနဲ့သူရှိပါတယ်။ ၄င်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာရင်တော့ ကိုယ့်အကောင့်ကို
ယာယီ ထိန်းသိမ်းခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းသော်လည်းကောင်း အရေးယူခံရနိုင်ပါ
တယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် စည်းကမ်းချက်အနည်းငယ်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
သည်ဆိုဒ်ဟာ အိမ်ကနေပိုက်ဆံရှာဖို့ လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို အကောင့်တစ်ခုပဲလုပ်
ခွင့်ပေးပါတယ်။ တစ်ခုထက်ပိုသော အကောင့်များကို ယာယီပိတ်ပစ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်
စည်းကမ်းချက်များထဲမှာ အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များမှ အသုံးပြုခြင်းကို လက်မခံသော်လည်း တကယ်တမ်း
သုံးလို့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ခုနကပြောခဲ့သလို အကောင့်များကိုမမှန်မကန်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အရေးယူ
login ဝင်ဖို့ proxy သုံးနိုင်သော်လည်း ကြော်ငြာကြည့်ဖို့ အသုံးပြုခြင်းလက်မခံပါ။
၄င်းဟာ ဘာကိုညွှန်းတာလဲဆိုတော့ ဥပမာ ကိုယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေ အကောင့်လုပ်နှိပ်နေတယ်။ နိုင်ငံခြား
ရောက်သွားရင်လည်း ဒီဆိုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့သဘောပါ။ ဒါကြောင့်လက်ခံတာပါ။ ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ
ဆိုတော့ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံဟာ အိုင်ပီနံပါတ်များမတူသလို အချိန်များလည်း မတူညီကြပါ။ သည်ဆိုဒ်ဟာ
တစ်နေ့ကြော်ငြာလေးခုပဲကြည့်ခွင့်ပေးဖို့ ၄င်းတင်ထားတဲ့ဆာဗာအချိန်နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကို အသုံးပြုပါ
တယ်။ ကိုယ့်အိုင်ပီပြောင်းသွားတာနဲ့ ကိုယ်ဝင်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ အချိန်လည်းပြောင်းသွားပါတယ်။ အဲတော့
ကြော်ငြာအသစ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုပြီး မမှန်မကန်လုပ်မှုနဲ့ အကောင့်ထိန်းသိမ်းခံရနိုင်ပါတယ်။
အလိုအလျောက်နှပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုခြင်းကို လက်မခံခြင်း
အချို့သော ကိုယ်တိုင်နှိပ်ရမှာပျင်းတဲ့သူများက အလိုအလျောက်နှိပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများကို အသုံးပြုကြပါ
တယ်။ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကို ဒီဆိုဒ်က လက်မခံပါဘူး။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိက အရေးယူခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
Referral များကို မမှန်မကန်လုပ်ခြင်း
ညွှန်းခြင်းများမှ ပိုက်ဆံပေးသော်လည်း ၄င်းအညွှန်းများကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းသုံးပြီး ပိုက်ဆံရချင်ရင်
Login ဝင်တာကြာနေရင်တော့ Refresh လုပ် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဝင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ရက်ကလစ် ၄ ခုနှုန်း
ဒီဆိုဒ်ဟာ တစ်နေ့ကို ကြော်ငြာလေးခုကြည့်ခွင့်ပေးပါတယ်။ကြော်ငြာကြည့်တာကုန်သွားပြီးနောက်တစ်ခါပြန်
You already viewed this advertisement in the last 24 hours ...
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်ကဝင်ကြည့်သော်လည်း အောက်ပါအတိုင်းပြနေတယ်ဆိုရင်
Another user using your IP address already viewed
this advertisement in the last 24 hours...
ဖိုရမ်လိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြား history စာမျက်နှာလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးမှ ကြော်ငြာပြန်ကြည့်ပါ။
Paypal, Alertpay (One IP per login)
၄င်းဆိုဒ်များကိုဝင်ရင် အိုင်ပီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဝင်တာအကောင်းဆုံးပါ။ ပရောက်ဆီသုံးရင်လည်း တစ်မျိုးတည်း
ပဲဖြစ်ရပါ့မယ်။ သို့မဟုတ်ရင်တော့ အထက်ပါအကောင့်များအဖျက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
(neobux အကောင့်ကိုတော့ မထိခိုက်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် paypal , alertpay မေးလ်ပြောင်းရပါ့မယ်)
Neobux နဲ့ ပက်သက်ပြီးလေ့လာချင်သေးတယ်ဆိုရင်
[email protected] ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဆိုဒ်လေးနဲ့ပက်သက်ပြီး အတော်အသင့်သိသွားပြီဆိုတော့အွန်လိုင်း
ကနေ ပိုက်ဆံရှာပြီး အပိုဝင်ငွေရနိုင်ပါပြီ။ အဝေးရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ (သုံးတတ်ရင်) ၄င်းနဲ့ပိုက်ဆံရ
နိုင်ပြီး ကျောင်းတက်နိုင်သလို ဝဘ်ဆိုဒ်ဝယ်ချင်လို့ အခက်တွေ့နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း ဒီကနေတစ်ဆင့်
တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပိုက်ဆံအပိုဝင်လာနို်င်ပါလိမ့်မယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ ဖိုရမ်များ လူမှုရေးဆိုဒ်များရေး
သားနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့တွေလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချိတ်ဆက်ပြီး ပိုက်ဆံပိုရှာနိုင်ပြီး အပို
Fund ရလာနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။
ဖော်၀တ် မေးလ် ထဲကနေရထားတာပါ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း စမ်းလုပ်ကြည့်နေပါတယ်
seem working but ... problem is same IP address
You can use ok?